Soo Iibso Guud ahaan Qaab 4-god ah oo Ice Hockey Ice Ice Ice ah - Rar bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Guud ahaan Qaab 4-Hole Ice Hockey Icebox
Guud ahaan Qaab 4-Hole Ice Hockey Icebox gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Wax soo saarka xeegada barafka ee la soo saaray waa mid wareegsan oo siman oo qurux badan, ka dhigaya xeegada barafka leh heerka muuqaalka.
Jirka sanduuqa hufan wuxuu ka samaysan yahay waxyaabo tayo sare leh oo PP ah, daboolka madowna wuxuu ka samaysan yahay silica.
Ka dib marka uu xirmo barafka xirmo, biyo buuxi, xir daboolka oo qabooji si aad u sameysid buskudka. Hawlgalku waa mid fudud.
Caaryada waxaa loo furi karaa si fudud, dhaqso, iyo dadaal la'aan, oo puck-ka guriga lagu sameeyo ayaa si fudud u go'i kara oo si fudud loo heli karaa.
size: Qiyaastii 23 * 6.5 * 5.5 cm /9.06*2.56*2.17 inji
Waxyaabaha: PP + silica gel
Qaabka guud waa mid aad u fudud oo ku saabsan quruxda, wax ku oolka ah, iyo ku habboon, fudud in la isticmaalo.
Ku samee cunnooyin fudud oo qabow leh cabitaanka aad ka heshid, miraha, cabbitaannada isboortiga, ama cabbitaannada u ekaanta madadaalo.
Kubadaha qaabeeyaha ah ee loo yaqaan 'Ball Shaped Ice Ice' ayaa kufiican samaynta boodhadhka guryaha lagu sameeyo si loogu buuxiyo dheecaannada aad jeceshahay, soodhaha, ama isku darka kale ee aad rabto
Wanaagsan tahay qaboojinta macmacaanka gacmo-gacmeedkaaga, baararka miraha, kafee qabow-qabow, iwm.
Way fududahay in la buuxiyo, barafku ma daato marka la dhigo qaboojiyaha, waana sahlan tahay in la nadiifiyo.
Muuqaalka gaarka ah ee barafka wareega, ku habboon shaaha barafka leh, liinta, iyo inbadan.
Qaab dhismeedka balaastigga adag, Naqshadeynta leakproof. Caaryado aan dheg-dheg lahayn, oo ku habboon caaryada keega, caaryada shukulaatada, khudradda Popsicle, iwm.